Accueil > Gazetin'ny nosy > Tsimbazaza: Nosazian’ny depiote ireo minisitra
Tsimbazaza: Nosazian’ny depiote ireo minisitra
Omaly alakamisy faha 24 novambra 2017 no nisy ny fihaonan’ny governemanta sy ny depiote araka ny voalazan’ny Lalàmpanorenana. Io fotoana io no hisian’ny ady hevitra hifanaovan’ny depiote sy ny mpikambana ao governemanta mivantana amin’ny fandehan’ny raharaham-pirenena rehetra. Io fotoanan io dia fivoriana azo ny olona rehetra atrehana ary mandeha mivantana amin’ny haino amanjerim-panjakana.
Efa mahazatra ny Malagasy ity fotoana ity ary maro no miandry izany ny olona.
Tamin’iny fotoana omaly iny dia tsy hiresaka momba ny fanontaniana sy ny adihevitra ary ny fifanasana vangy ataon’ny roa tonta isika fa hitodika amin’ny fomba entin’izy ireo hiatrika izany fivoriana goavana izany. Ho an’ireo any ambanivohitra lavitra any sy ny any amin’ny faritany ka mbola tsy ampy loatra ny haino aman-jery hahazoana ny vaovao, dia ity fihaonan’ny governemanta sy ny depiote mivantana ity no mba fotoana hahazoan’izy ireo izany.
Tsy nitodika amin’ny ady hevitra isika satria araka ny voalaza teto amin’ny gazety omaly dia “sinema na sary mihetsika” no nataon’ny roa tonta amin’ity fivoriana ity. Ny votoantin’ny ady hevitra no tiana holazaina amin’izany satria hita taratra tamin’ny fandaniana ny lalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana iny fa mandeha ho azy ny raharaha ao Tsimbazaza ao. Tsy misy intsony ny ady hevitra mahakasika ny tolo-dalàna aroson’ny governemanta holanian’ny depiote toa ny mahazatra hatramin’izay sy araka ny voalazan’ny lalàna. Manaraka izany koa die efa tsy mifantoka amin’ny raharaham-pirenena intsony ny depiote ireo fa manomana ny fifidianana amin’ny taona 2018. Tapitra amin’io fotoana io koa mantsy ny maha-solombavambahoaka azy ireo, ka tsy mahatombina intsony.
Raha toa ka tamin’ny 10 ora maraina no tokony hanomboka ny fihaonana, dia tamin’ny 12 ora sy 10 minitra izany vao tonga ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana. Efa tonga tao Tsimbazaza tamin’ny 9 ora 30 mn teo avokoa ireo minisitra niandry ny fanombohan’ny fihaonana. Niandry teo an-tokotanin’ny Antenimierampirenena nandritra ny 2 ora 10 mn izy ireo. Tsy fomba izany ary tsy fanao amin’ny fotoana toa itony. Ny depiote indray dia zara raha nisy 10 no tonga tao Tsimbazaza tamin’io fotoana io. Tsy nisy olona ny trano fivoriana raha tsy tamin’ny 11 ora sy 30mn vao naira-nirona indray izy ireo ka nisy 100 mahery. Nifanontany tena ny rehetra hoe mbola hisy ve ity fihaonana ity sa tsy hisy intsony? Depiote vitsivitsy no nanontanianay ny antony tsy ahatongavan’izy ireo ara-potoana. Dia misy ny miteny fa hamaly faty ny minisitra hono ry zareo satria toa izao no ataon’izy ireo rehefa angatahana fihaonana. Misy indray ny milaza fa mbola variana amin’ny raharahany manokana ny depiote satria mpandraharaha avokoa ny 95% amin’izy ireo. Ny sasany aza milaza fa efa hifarana ny fotoana maha-solombavambahoaka ka samy mikarakara ny tenany no sisa atao.
Tamin’ny 12 ora vao tonga izy ireo rehefa avy nivorivory sy nitsitokotoko tao amin’ny trano fisakafoanana sy teny an-tokontany. Tamin’izany koa no nahenoana fa fanasaziana ny minisitra hono no antony tsy niraharahan’ny depiote ny fahatongavan’izy ireo tao Tsimbazaza izao. Milaza moa ireo depiote ireo fa noho ny raharaha tsy mandeha amin’ny laoniny intsony eto amin’ny firenena no anton’izany. Samy nanana ny filazany ny tsirairay izay nanontanianay.
Valifaty, sazy, izany no nandikana ny zavatra nifanaovan’ny roa tonta tao Tsimbazaza omaly. Izany no nitantanana ny firenena sy ny mpanao pôlitikantsika amin’izao fotoana izao. Izany no fitondrana eto Madagasikara ka aza gaga raha toa izao no iainan’ny Malagasy amin’izao fotoana izao.